Okwangoku, kukho iindlela ezininzi zokucoca umzimba wee-toxins kunye ne-toxins. Indlela eyaziwayo neyaziwayo yokuhlanjululwa komzimba welayisi iziphumo ezimangalisayo: ukuphucula impilo kukuphucula kakhulu, umzimba uhlambulula uphinde uvuselele.
Ukuhlanjululwa komzimba welayisi ngenye yezindlela ezifikeleleke kwaye zilula ukuphucula umzimba, ofumana ukuthandwa.
Yintoni le ndlela yokuhlambulula umzimba?
Ngokubanzi, iChina yisekho yale ndlela. Indlela yerayisi yokuhlambulula umzimba isinika ukucocwa kweetyu ehlanganiswa ngamalungu, i-slags eyingozi kunye ne-toxin. Ngokuncediswa kwelayisi, kukho ukucoca ngokufanelekileyo kwesibindi kunye namathumbu, kuba irayisi, ixutywe emanzini, ibamba zonke izinto eziyingozi. Ukucoca umzimba ngelayisi yindlela ekhuselekileyo, kodwa ungayisebenzisi kakubi. Kucetyiswa ukuba uyisebenzise kanye ngonyaka.
Ukuhlanjululwa komzimba usebenzisa ilayisi kukwahlula zibe zimbini iindlela , kwaye ngamnye kubo umbala obomvu, ongahlambulukanga kwi-rice shell.
Indlela yenombolo 1.
Ubude beli ndlela luneentsuku ezingama-40. Okokuqala, kufuneka ulungiselele amathandathu angama-half liter liter and number them so that you do not confuse them later. Okwesibini, kufuneka uhlambe ilayisi, kumgama kangangokuthi amanzi ahamba ngokucacileyo, kwaye afake kwisitya kwiNombolo 1. Emva koko, uthele ngamanzi acocekileyo. Okwesithathu, emva komhla uvula amanzi, supha kwakhona irayisi uze uyithulule kwakhona ngamanzi. Thatha ingqayi phantsi kwenombolo 2 kwaye ubeke irayisi ehlanjwe, malunga neepuniji ze-2-3 uze uthele amanzi. Okwesine, emva kweentsuku ezintathu, cima amanzi ukusuka kumanqana uNombolo 1 kunye no-2, susela ilayisi kwakhona kwaye ungeze amanzi kwakhona. Okulandelayo, ngendlela efanayo, lungiselela inombolo yebhanki 3. Okwesibini, yenza inkqubo efanayo kunye neebhanki No. 4 kunye no-Nombolo 5. Kwintandathu, emva kweentsuku ezintandathu, thatha intombazana № 1 uze ukhuphe amanzi, uhlambe ilayisi kunye ukuwuthululela ngokupheleleyo ngamanzi abilayo. Emva kwemizuzu engamashumi amane sidla isidlo sakusasa kunye nelayisi, akukho nto yokutya. Ukongeza kwerayisi ayinanto. Ilayisi kufuneka ihlaziywe kwaye idliwe ngokufudumele. Ngaphambi kwesidlo sakusihlwa unako ukusela iglasi yamanzi afudumele, kwaye emva kokutya kwasekuseni iiyure ezintathu awukwazi ukusela nokutya. Bhala uluhlu lwakho oluphambili ungashiya enye, kubaluleke kakhulu, awukwazi ukutya ukutya okunamafutha. Kunconywa xa uhlambulula umzimba welayisi ukuba udle iimveliso ezininzi ezizityebi kwi-potassium. Ngesixhenxe, ibhanki, ekhululiwe, kufuneka izaliswe ilayisi, kwaye uthele amanzi phezu kwesikimu esingentla. Kwaye ukwenjenjalo nazo zonke iibhanki ezisele.
Indlela yenombolo 2.
Le ndlela ingabizwa ngokuba yindlela ecacileyo, kuba iyenzeka kwiintsuku ezintathu. Ingundoqo yale ndlela kukuba ungasebenzisa kuphela irayisi kwaye akukho nto ngaphezulu kule mihla emithathu. Inani lokutya lingaba nantoni na, kodwa kucetyiswa ukuba idle kathathu ngosuku. Isidlo sakusasa singabanjwa ukususela kwi sixhenxe ukuya ku-9 ekuseni, isidlo sakusihlwa sisuka kwenye ukuya kweyesithathu, isidlo sakusihlwa sisuka ezintlanu ukuya ezintandathu. Kubalulekile ukuba ukususela ngomhla we-9 ukuya kwehora leshumi elinanye awukwazi ukutya nokusela, kuba ngeli xesha i-tract painter tract is cleansed. Kufuneka udle ngokukhawuleza, uhlalutye yonke into. Unokusela amanzi ngaphambi kokutya, kwaye emva kweyure enye okanye ezintathu. Kucetyiswa ukuba ungaphuzi nayiphi na isiphuzo, ngaphandle kwamanzi kunye neyeyi, ezingenakunyuswa ukuba zisebenzise kakubi, kuba umsebenzi welayisi ukususa umswakama ongaphezu komzimba kunye ne-slag.
I-recipe yokupheka ilayisi: kufuneka uhlanjululwe kakuhle imbewu, uthele amanzi ukuze ugubungele ilayisi ngesentimitha enye. Ukuqhubela phambili kufuneka kuphekwe encinci, ukwenzela ukuba ingqolowa ihlale ihleli. Iipropati eziwusizo zokugcina irayisi kuphela iiyure ezingama-24.
Ukucoca umzimba ngelayisi kunceda ukuphucula impilo yakho, kwaye kwezinye iimeko kunceda ukuhlangabezana nezifo. Kodwa, nangona kunjalo, ngaphambi kokuba kwenziwe ukucaciswa komzimba ngelayisi kuyimfuneko ukufumana udibaniselwano nodokotela.
Iinkqubo zamanzi ngoku zifashisa
Imigangatho yokunyanga kwesifo esingapheliyo
UStas Pieha uxolisa esidlangalaleni kubantu baseUkraine, ividiyo
Iimpawu ze-Cosmetics ze-21 leminyaka yobisi lwebhokhwe
Imiqondiso ye-zodiac, eya kuphumelela ngoJanuwari 2018
I-Raspberry cheesecake parfait ngaphandle kokubhaka
Iimfuno zabasetyhini abadala